Moate Lodge B&B - n'ime obodo
Moate Lodge bụ ụlọ ọrụ ugbo dị afọ 250 na Georgia n'ime ime obodo Kildare ma bụrụ ebe udo na ịdị jụụ dị nso na Athy. Raymond na Mary Pelin nwe ya ma rụọ ya. Ile ọbịa ọbịa ọdịnala Irish yana nlebara anya na -emesi nkasi obi na nchekwa gị obi.
Duke nke Leinster wuru, Moate Lodge bidoro na 1776 ma dị na njedebe nke ogologo okporo ụzọ nkeonwe nke na -eduga n'ihu ụlọ ahụ. Ezubere ụlọ ime ụlọ 4 ọmarịcha niile nwere nkasi obi gị yana atụmatụ ụlọ ochie.
Dina n'ụra akwa akwa kachasị mma ma teta n'ụra na -ekiri ọmarịcha akụkụ obodo na -atụgharị. Mgbe ahụ họrọ nri ụtụtụ gị a kwadebere ọhụrụ nke enyere n'ime ụlọ iri nri nke anwụ jupụtara. A na -enye nri nri ụtụtụ anyị nke ukwuu site na 7.00 ruo 10.30 ụtụtụ na -agụnye mkpụrụ osisi ọhụrụ, yogọt, chiiz, achịcha a na -eme n'ụlọ, ọka, porridge, àkwá sitere n'ugbo na nri ụtụtụ Irish a ma ama, yana itinye aka nke na -eme ụtụtụ ọ bụla pụrụ iche.
A nabatara ndị ọbịa ka ha na -awagharị ugbo. Enwere ọtụtụ ihe Raymond nwere ike ịgwa gị gbasara akụkọ obodo, Agha Obodo America, Agha Ụwa nke Abụọ na Rugby Irish nke ị ga -abịa hụ onwe gị n'ọbá akwụkwọ agha ya.
Bed & Breakfast, mmefu ego, Pet Friendly, Ezigbo ezinụlọ, 3 Star, Okwesiri